जापानी शिष्टाचार (Courtesy) : अनिवार्यता वा औपचारिकता ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानी शिष्टाचार (Courtesy) : अनिवार्यता वा औपचारिकता ?
जापानलाई टेक्नोलोजीको देश भनेर चिनिन्छ। तर जापानको एउटा यस्तो पाटो छ जसलाई तपाई हामी यहाँ आएपछि मात्र थाह पाउछौ। त्यो हो जापानी सामाजिक शिष्टाचार वा भद्रता। जापानीहरु अतिनै शिस्ट र भद्र हुन्छन। त्यसकारण जापान घुम्न, पढ्न वा कामको शिलशिलाले आएका बिदेशीहरुले पनि स्वहि अनुरुप शिष्टता देखाउने जापानीहरुमा आशा हुन्छ। तरपनि बिदेशीहरुबाट जान अन्जानमा वा संस्कृतिको भिन्नताले पैदागर्ने अशिस्टता प्रति जापानीहरु केध राख्दैनन् र माफ गर्छन।
केहि नियम चाहि यस्ता हुन्छन जुन सबैले मान्नुपर्छ। कसैको घर छिर्नुपूर्व जुत्ता चप्पल खोल्नु यहाँको नियम हो। नुहाउने तरिकामा पनि केहि नियम हुन्छन। बाहिर जिउ पखालिसकेरा मात्र पब्लिक बाथ (सेन्तोउ) होस् वा ओन्सेन (तातो-पानीको मूल) छिर्नुपर्छ। ओन्सेन, ओफुरो(बाथ टब) छिर्नु अघि जिउ पखाल्नु नियम नै हो।
सार्बजनिक स्थल वा ट्रेनमा रुमाल वा टिस्युले नाक सफा गर्नुलाई शिष्ट मानिन्न। जापानीहरु ट्रेन मा वा बाटोमा हिड्दै खान खादैनन्। कोन आइस क्रिम चाहि अपबादमा पर्छ। हिड्दै खाने वा स्ट्रीटमा खाने भनेको ओमाचुरी (फेस्टिभल)मा हो। तर पनि हिड्दै खाने जापानीहरु नभेटीने भने होइन।
आउनुहोस हामी हजुरहरुलाई जापानका केहि भद्र मानिने व्यवहारहरु बताउछौ।
जापानीहरुको घरमा जादा वा केहि रेस्टुराण्टहरुमा जादा भुइँमा बस्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। हरेक औपचारी स्थितिमा बस्दाखेरी आफ्नो दुवै खुट्टालाई माथि देखाइएको जस्तैगरि तलतिर फोल्डगरेर बसिन्छ। यो बस्ने तरिकालाई “सेइजा” भनिन्छ। अरु अनौपचारिक बेलामा भने हजुरलाई सजिलो लाग्ने गरि बस्दा फरक पर्दैन। यति विचार गर्नुहोस कि अरुलाई खुटाले नलागोस। जापानिजहरु पनि सेइजामा लामो समय बस्न सक्दैनन्। यदि हजुरहरुलाई कसरि बस्दा राम्रो होला भन्ने कुराले पिरोल्छ भने अरुको गरेको अनुसार गर्नु नै उचित हुन्छ।
शिर निहुराउदा र हात मिलाउदा
शिर कति निहुराउने भन्ने धेरै बिदेशीको समस्या हुन्छ। सामान्य नियम भनेको आफुले शिर निहुराउने व्यक्तिको प्रतिष्ठा हेरेर निहुराउनु पर्छ भन्ने छ। तर यो पुरानो मान्यता भैसक्यो। कसैलाई भेट्दा थोरै मात्र निहुरिनु औपचारिक मानिन्छ। अहिलेका जापानीहरु हात मिलाउन अघि सर्छन। तर पहिले पहिले ह्यान्ड सेकलाई त्यति शिष्ट भने मनिन्थेन। त्यसैले आफुले पहिले हात अघि बढाउने भन्दा पनि भेटेको मानिसले क गर्छन भन्ने कुरा ध्यान दिदा सजिलो हुन्छ।
कम्पनिमा काम गर्ने भएपछि हजुरको आफ्नै नामको बिजिनेस कार्ड हुनेछ। जापानमा बिजिनेसको पहिले भेट र मिटिङ्गहरुको सुरुवातमा बिजिनेस कार्ड साटा साट गरिन्छ। कार्ड आदान प्रदान गर्ने तोकिएको तरिका छ। कतिको शिष्ट तरिकाले कार्ड लिनु दिनु भएको छ भन्ने कुराले हजुर को बिजिनेस डिलमा असर पुराउन सक्छ। पहिलो बिजिनेस भेटमानै कार्ड लिने दिने गर्नुहोस। यसले हजुर काम प्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने देखाउछ। कार्ड लिदा वा दिदा दुइ हातले लिनु भद्र मानिन्छ। लिइएको कार्ड जतनसंग राख्नु र त्यसमा केहि नलेख्नु जापानी शिष्टता हो।
जापानीहरु कसैले केहि “फेबर” वा सहयोग गरेमा सानोनै भएपनि उपहार साटा-साट गर्छन। यो जापानी समाजको रिति हो। कसैको घर जादा कोसेली लिएर जानु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र नभएर हजुर कतै घुम्न जानु भएको छ भने आफ्नो वर्क प्लेसमा कोसेली(ओमियागे) लान नबिर्सिनु होला। उपहार जे पनि हुन सक्छन। फूल, चकलेट, फल वा केहि सानो स्न्याक्स, उपहारलाई सानो वा ठूलो भनिदैन। पैसा दिदै हुनुहुन्छ भने खाममा राखेर दिनु शिष्टता मानिन्छ। काममा हजुरले केहि गरे बापत उपहार पाइरहन सक्नु हुन्छ। आफुलाई सहज लाग्दैन भने हजुर त्यो उपहार नलिन पनि सक्नु हुन्छ। त्यस्तो बेला उपहार पर्दैन तर धेरै धेरै धन्यबाद भन्दा हजुर र काममा अरुको सम्बन्ध मिझासिलो बन्न सक्छ।
प्रसंशा वा बढ़याई र बोलाई (Directness)
जापानीहरु कसैको प्रसंशा गर्न कन्जुस्याई गर्दैनन्। त्यसलाई नराम्रो पनि मानिदैन। यदि हजुरले केहि जापानिज वाक्य बोल्न र चपस्टिक राम्रोसंग चलाउन सिक्नु भयो भने जापानिजहरु हजुरको बढ़याई गरिहालछन्। मसिनो कुरामा प्रसंशा पाउदा “त्यस्तो होइन सिक्दै छु” भन्नु राम्रो हुन्छ।
त्यसैगरि जापानीजहरु बोलाईमा डाइरेक्ट हुन्नन्। यदि हजुरको केहि कुरा उनीहरुलाई मनपर्दैन भने सिधै हजुरलाई भन्दैनन। यो बानिले विदेशी हरुलाई धेरै समस्या पुराउछ। उनीहरु घुमाउरो शैलीमा कुरा व्यक्त गर्ने भएकाले त्यो बुझ्ने कोशिस गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई काममा कसैको विचार वा आईडिया मन नपरेमा, सिधै हुन्न भन्नु भन्दा, घुमाउरो तरिकाले अभिव्यक्ति दिदा राम्रो मानिन्छ। चिन्ता नलिनुस हजुरको अभिप्राय बुझ्न जापानीहरुलाई केहि गारो हुदैन।
भनिन्छ नया ठाउँमा अरुले जसो जसो गर्छन उसो उसो गर्दा राम्रो। शिष्टता र भद्रताको कुरामापनि आफ्नो वरिपरिका जापानीहरुले जसो जसो गर्छन तेस्तै नक्कल गर्दा फरक पर्दैन। पुरा सिक्न त अबस्य समय लागिहाल्छ।